म आफैं फेसनको प्रयोगशाला हूँ : तमु शर्मा - Himalayan Kangaroo
म आफैं फेसनको प्रयोगशाला हूँ : तमु शर्मा
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ पुष २०७२, शुक्रबार ०८:०३ |
मेलबर्न । फेसन टल्कमा यसपटक तमु शर्मा तमन्नासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैर्छौ । हाल सिड्नीमा रहँदै आएकी तमु फेसनका नाममा अनावश्यक टाउको दुखाइरन चाहन्नन् । आफूलाई सहज लाग्ने जे लगाए पनि त्यो फेसन हो भन्ने उनको मान्यता छ । जे लगाए पनि अक्सर कनभर्स जुत्ता भने उनी छुटाउँदिनन् रे । प्रस्तुत छ फेसन सम्बन्धी तमुको केही विचार र धारणा :
तपाई फेसन ट्रेण्ड किन फलो गर्नुहुन्छ ?
मेरो लागि जुन पहिरन लगाउँदा सहज महसूस हुन्छ,त्यही नै फेसन हो । त्यसैले अरुले के लगायो भनेर त्यसको सिको गर्दिनँ ।
के तपाई आफूलाई फेसनप्रति सजग व्यक्तिको रुपमा लिनुहुन्छ ?
अहँ,म फेसनसँग त्यति सचेत छु जस्तो लाग्दैन । किन भने म आफूलाई जे लगाउँदा सहज महसूस गर्छु,त्यही पहिरन लगाउँछु । कहिलेकाहीं बजारमा चलेका पहिरनहरु पनि लगाउँछु । त्यसमा पछिल्लो डिजाइनहरु पनि पर्छन् ।
सुन्दरता र फेसनमा कुन महत्वपूर्ण छ ?
सुन्दरता र फेसन दुवैको आ आफ्नै महत्व र स्थान छन् । मैले माथि नै भनिसकें कि हामी जे लगाउँछौं,त्यो फेसन होइन । हामीले त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौ,बरु त्यो फेसनमा पर्छ । मेरो विचारमा सौन्दर्य भन्ने कुरा जहाँ पनि हुनसक्छ । त्यसैले सौन्दर्य नै बढी महत्वपूर्ण लाग्छ ।
तपाईले आफ्नो सुन्दरता र फेशन लिएर सबैभन्दा राम्रो कम्प्लिमेन्टस् कहिले पाउँनुभएको थियो ?
अहँ,मलाई त्यस्तो कुनै सम्झना छैन । तर मेरा साथीहरुले प्रायः मलाई मैले लगाउँने लुगा र झुम्का अनि अन्य ज्वेलरीहरु निकै म्याच भएको भनेर तारिफ गर्ने गर्छन् । म जुत्ता समेत पहिरनसँग म्याच हुने गरी लगाउँन रुचाउँछु ।
के तपाई ऐना विना पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ ?
अहँ विल्कुल अस्भम्व । संसारमा त्यस्ती युवती को होलिन् र जो ऐना विना पनि बाँच्न सक्छे । म पनि ऐना हेरिरहन मन पराउँछु ।
तपाई कस्तो पहिरन लगाउँन रुचाउँनुहुन्छ ?
म लगाउँदा सहज लाग्ने क्याजुअल लुगाहरु लगाउँन रुचाउँछु । म जे लगाए पनि कनभर्स जुत्ता अक्सर छुट्दैन । हिल चप्पल र जुत्ता खासै मन पराउँदिनँ ।
फेसन आत्मसन्तुष्टिका लागि आवश्यक कि अरुको आकर्षणका लागि ?
मेरो विचारमा फेसन आत्म सन्तुष्टिका लागि गर्ने हो । जब तपाई आफू राम्रो,राम्री देखिएको छु भन्ने अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईभित्र आत्मविश्वास बढाइदिन्छ । अनि तपाई आकर्षक देखिनुका साथै तपाईको आत्म विश्वास पनि उच्च छ भने अरु व्यक्ति प्रभावित हुनु स्वभाविक हो ।
तपाईको सौन्दर्यको राज ?
म आफूलाई सिंगार्न खूब रुचाउँछु । म प्राय आफैंमाथि विभिन्न प्रयोगहरु गर्न रुचाउँछु ।
मानौं तपाईले २० हजार डलर बराबरको शपिङ कुपन जित्नुभयो भने कसरी खर्चनुहुन्छ ?
२० हजार डलर ? ओहो यदि त्यसो हुँदो हो भने सबै भन्दा पहिले त म मेरो बोसलाई टेक्स्ट पठाउँथे–आज म काममा आउँन असमर्थ छु भनेर । शायद विरामी भएको बाहना बनाउँथें । अनि मनपर्ने शपिङ मल जान्थें । पत्याउँनुहुन्न होला त्यो २० हजार डलर त म २–४ घण्टाभित्रै उडाइदिन सक्छु ।
Previousपूर्व युवराज पारस शाहले भने-नेपालको राजा बन्न चाहन्न
Nextकविता : हर्के बाको सरकार – सफल पाण्डे
प्रिती -वाडिया बिबादमा अन्डरवर्ल्डको चासो
५ असार २०७१, बिहीबार १४:१६
१४ कार्तिक २०७२, शनिबार ०२:१२
सर्जरीविना नै स्तन ठुलो बनाउने ब्रा !
२० भाद्र २०७२, आईतवार ११:२३
सुन्दर अनुहारको लागि घरमै यसरि लगाउनुहोस् टमाटरको फेसियल प्याक
१३ माघ २०७५, आईतवार १२:२१